Waxa Curiyay Maxamed Hirad August 12, 2007 Abaal waa maanso cusub oo dhinacayo badan taabanaysa uuna curiyay abwaan Maxamed Hirad bishii July 16, 2007. Waxa uu abwaan Hirad maansadan ku cabirrayaa xusuustiisii dhibaatadii iyo burburkii Soomaaliya ka dhacay iyo waayo aragnimadii laga dhaxlay.
Abwaan Maxamed Hirad Waxa uu abwaanku si murtiyaysan u soo bandhigyaa dhibaatadii kala gaadhay dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah iyo firxadkii iyo qaxootigii ay sababeen dagaalada sokeeye. Waxaa kale oo uu abwaanku maansadan ku eegayaa shacabka Soomaaliyeed ee ay dhibaatadu soo gaadhay iyo beesha caalamka wixii ay kala kulmeen. Yaa Soomaalida abaal ka galabsaday, yaase kaalintii ay ka filayeen gabay? Waa su’aal uu abwaanku maansadan jawaabteeda ku soo bandhigayo.
Abwaanka oo hadda ku nool carriga Maraykanku waxa uu aaminsan yahay in Carabi ay ka masuugtay Soomaalidu wixii ay ka filaysay halka gaalo iyo reer galbeed ay u galeen abaal aanay weligood gudi karin.
Waxa uu abwaanku si gaara ugu xusayaa gabaygan xiisaha leh daryeelka ay Soomaalidu ku haysato wadamada reer galbeedka ee qaabilay siiba Maraykanka. Taas oo uu ugu hayo abaal weyn, isagoo dhinaca kalena la yaabban kuwa indhaha ka laliya waxtarkaas loo geystay iyo nolosha cusub ee ay ku naaloonayaan ee ku faruuryo xidhan arrimo kale oo aanay dani ugu jirin. Ugu dambeystiina abwaan Hirad waxa uu ballan qaadayaa in aanu marnaba ka mid noqon doonin kuwa loo wakiisho waxyeelaynta dadka aan waxba galabsan.
Haddaba abwaanka oo arrimahaas iyo kuwo kaleba ka hadlayaa waxa uu gabaygiisii Abaal ku yidhi:-
Nin weyn oo wisiisiyey wixii nolol ku soo maray Weedhuu ka sheegaa aarmay idin wareentaa Markii duul washaysiyi waleecaad ha raacee waddenkeenna gubayeen koonfur iyo waqooyiba
Dawlidnimo la waayaye ciidan waabiyaa jirin
Jabhaduhu wax reebayn wiilal faydan taliyeen
Qaar wadaadda sheegtana ku waafaqay halaaggii
Wershedihii la dumiyaye wasiiradii la gawracay
Nin waliba walaalkii iyo kii xigay wadnaha jaray
Dadkoo meel ku wada nool qaar waa kan la lahaa
Hantiday wareejeen iyo maydkii wadhnaa daa Wahsi li’i markay orod naftu wehel ka dhigataye Waaqlihiyo rasaastii dheguhu wiifta na hayeen
Wedka ka cararkiisii webiyada ku jiidhnaye
Wadiiqada habaarwaalid ku weydoowney toban godol
Waxaan sii waraaqnaba xadka Kiiniya walam nidhi
Maalintaan walaalnimo Carabtii ka weynaye
Islaamnimo wadaaggii weyrax noogu imanine
Wiswis diinta qaar galay wacdi lagu daweeyaye
Qaarna ay ku waasheen weerarkiyo xasuuqii
Wakiiladii Maraykanee waabahaanu jiifniyo
Welwelkii qaxootiga naga soo walwaalaye
Waraaqaha na siiyaye dalka nala wadaag yidhi
Kii weligii joogiyo kii waagaa soo galay
Xuquuq inay wadaagaan warkeedii na siiyoo
Warasadiyo dumarkii wahabkii ka qaadoo
Waqtigay yimaadeen intii ay wakilayeen
Waayuhu u kala bixin wig iyo welfeer hele Dhalintana wax barashiyo, shaqo waasac uga dhigay
Waayeelka daalana, waalidkood sidaan nahay
Lacag aan la waayeyn, oo la waabin noo qoray
Waxtarkiyo xanaanada, naga weecanaynine
Waagii guduutaba, caafimaadka noo wada
Adduunyada wixii dhaca Waaxid kaa qadarayoo
Maalin waad wacnaataa midna waad wareertaa
Dadna waa wabiin jaan midna waa wadeygaa
Waxaad kala ogaataa markii wegerad kuu go’o
Runta lagama waabtoo been looma weecdee
Wedenkeer Maraykaan waa hoy walaalnimo
Haddaan walax abaal guda waafi looga dhigi Karin
Wargaysyada in lagu qoro waajib bay inagu tahay
Kuwa weger yidhaahdee wanaaggaa illaawee
Dalal kale warkood iyo wiglo noo cayaaree
Walaahowga beenta ah dadka ku la wareegaa
Keenana ku wiiqaa na walaaqi maayaan Kuwa walafku qaadaye wada hadalka diidane
Diintii wacnayd iyo waanadeed maqlaynine
Weliyaal Ilaah iyo warjeefyada carruuraha
Dadka wadar u laynta noo wakiilan maayaan
Weedhii abwaanadu horay noogu weriyeen
Waatii ahayd hadal badan weel ma buuxshee
Duul kastoo wax dilisiyo fidmo iyo wareer wada Waa weled ibliisoo na walaashan maayaan